Nofeembar | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2011
SHIRKII AL-SHABAAB EE BAYDHABO KA SOCDEY OO MEEL XASAASI AH MARAYA
Nofeembar 30, 2011
Iyadoo maalmihii la soo dhaafey shir weyn uu mas’uuliyiinta Al-Shabaab uga socdey magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Baay ayay madaxdii ka qeyb gashay kulankaasi ku jeex jeexeen arrimo badan oo manta dalka uu marayo.
Kulankaas ayaa waxa hadalo ku aadan Dagaalada Al-Shabaab ay ku hoobatay ka jeediyay mas’uuliyiin uu ka mid yahay Ali Dheere iyo Hassan Daahir oo ayaga halkaasi hadalo ku aadan sida loo xoojin karo Dagaaladaasi ka jeediyay goobta waxayna codsadeeyn in laga wada qeyb qaato dagaalada si beel ahaan xitaa oo mar awoodii Shabaabka ee Magaalada Muqdisho loo soo celiyo.
Waxaa la sheegay in ay goob joog yihiin madaxda xarakada Mas’uulka uga ah Gobolada ay maamulaan Kooxda Alshabaab.
Dhanka kale waxaa halkaasi joogo rag la sheegay in ay Qurbo Joog yihiin oo ka kala yimid Wadamada Dibadda.
Ugu dambeyntii shirka waxaa la sheegay in ay ka soo bixi doonaan Fatwooyin ka dhan ah Dagaalada ay wadaa Kooxda Alshabaab ee ku aadan Wadamada Kenya, Ethopia and Amisom iyo Dowladaba
Warar kale, Xildhibaano ka mid ah baarlamanka KMG Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in Gudoomiyaha barlamanka uu diiday in uu furo fadhiyada barlamanka.
Max’ed Nuur Sheegoow oo ah Xilidhibaan ka tirsan barlamanka Soomaaliya oo u waramay Warbaahinta ayaa ku eedeeyey Gudoomiyaha barlamanka Shariif Xasan in uu si cad ah u diiday in uu furo fadhiyada barlamanka Soomaaliya oo mudo badan hakad ku jira.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Gudi uu ka mid yahay ay la kulmeen Gudoomiyaha barlamanka si ay uga dhaadhiciyaan si deg deg ah loo furo fadhiyada Xildhibaanada islamaraakana looga doodo arimo ay ka mid yihiin qorsho howleedka dowladda balse waxa uu tilmaamay in Shariif Xasan uu taasi ka biya diiday sheegayna in aysan muhiim aheyn in laga dooda arintaasi.
Dhinaca kale Xildhibaan Mowliid Macaane oo isna la hadlay Warbaahinta ayaa waxa uu codsaday in si deg deg ah loo furo fadhiyada barlamanka, isagoo sheegay in Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha barlamanka aysan go’aan ka gaari karin maslaxada Umada Soomaaliyeed.
Xildhibaanada barlamanka Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay kulamo gooni gooni ah ku yeelanayey magaalada Muqdisho ayaa waxa ay codsanayeen in in la furo fadhiyada barlamanka Soomaaliya.
SUBAC QURAANKA KARIIMKA OO RAXANWEYN AH IYO DUCOOYIN LAGA AKHRISTO SIXIRKA
DUCOOYINKA LOO AKHRISTO CAAJISKA AMA SIXIRKA
SHEIKH C/RASHIID SHEIKH CALI SUUFI
ODAYAASHA DHAQANKA DIGILMIRIFLE: PUNTLAND IYO GALMUDUG WAA QABIILO, DIGILMIRIFLE CIDNA KAMA JOOGIN SHIRKII MAHIGA.
Nofeembar 29, 2011
Odayaasha Dhaqanka Beelaha DigilMirifle ayaa gaashaanka u daruuray shirka Qaramada Midoobay ay ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ka qeyb galeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, bulshada rayidka iyo dowlada federaalka.
Malaaqyada, Ugaasyada iyo Odayaasha dhaqanka oo si kala gaar gaar ah u Hadley, kadib markii manta ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay ku sheegeen in ay aad uga xun yihiin sida Mahiga wax u maamulay.
Somalida 4.5 ayay wax ku qeybsataa, marka Mahiga intee buu ka keenay qaabka uu wax u soo xulay, Mahiga waxba nooma yeerin karo, waana ka diidney” ayay yiraahdeen qaar ka mid ah odayaasha.
Puntland waa Qabiil, Gal Mudug waa Qabiil, Ximin iyo Xeeb Waa Qabiil, yaa loo sheegaa taas, Aaway dadkii kale, waxa looga dan leeyahay waan garan karnaa” ayay hadalkooda raaciyeen.
“Dowlada markii la dhisaayay anaga (Odayaasha) ayaa wax ka dhisnay, xildhibaan aan lagu soo magacaabin saxiixa odayaashana ma jiro, marka ma waxay raban wixii aan dhisnay inaan ka laabano” ayay isweydiiyeen.
War Deg deg ah: Qaraxyo khasaare u geystay askar iyo dadka shacab oo maanta ka dhacay Degmooyin ka tirsan Muqdisho
Laba qarax oo maanta ka dhacay Muqdisho ayaa sababay dhimashada saddex qof oo rayid ah iyo dhaawaca laba askari oo ka tirsan kuwa dowladda KMG ah ee Soomaaliya, sida ay saxaafadda u sheegeen goobjoogayaal ku sugan degmooyinka ay qaraxyadu ka dhaceen.
Qaraxa koowaad oo ka dhacay xaafadda Maxamuud Xarbi ee degmada Wardhiigley ayaa wuxuu dilay laba caruur ah, iyadoo la sheegay in caruurtu ay garaaceen walaxda qaraxday oo aan illaa iyo hadda la ogeyn nooceeda.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Wardhiigley ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid aad u xoog badan, balse uusan geyn khasaare ka badan dhimashada labadii cunug ee ku ciyaarayay ka hor intii uusan qarxin.
Qaraxii labaad ayaa ka dhacay agagaarka jaamacadda Gahayr ee degmada Wadajir oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada AMISOM, waxaana lagu weeraray askar kuwa dowladda KMG ah ka tirsan, iyadoo uu ku dhintay qof rayid ah ayna laba askarta DKMG ah ka tirsan ku dhaawacmeen.
Ma jiro wax hadal ah oo ku saabsan qaraxan oo kasoo baxay dowladda KMG ah, balse dhowr jeer oo hore ayaa goobta uu maanta qaraxa ka dhacay lagula eegtay qaraxyo gaadiid ay wateen AMISOM iyo ciidamada dowladda KMG ah.
Inta badan qaraxyada lagu weeraro ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa sheegata Xarakada Al-shabaab, inkastoo aysan qaraxa maanta waxyeellada u geystay ciidamada Burundi ee AMISOM ka tirsan aysan ka hadlin.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-moon ayaa si adag u cambaareeyay go’aankii ay Al-shabaab shaqooyinka uga joojisay 16-hayadood oo kuwa gargaarka ah, ayna kula wareegtay xarumihii ay ku lahaayeen gobollada ay ka taliyaan.
Al-shabaab ayaa shalay waxay ka joojisay howlihii ay ka hayeen gobollada ay ka taliyaan 16-hay’adood oo kuwa gargaarka ah, kuwaasoo shan ka mid ah ay yihiin kuwa Qaramada Midoobay, waxaana sidoo kale ku jiray hay’ad Soomaaliya laga maamulo.
“Xoghayaha guud wuxuu si adag u cambaareynayaa go’aankii Al-shabaab ay kaga joojisay howlahii ay bulshada u hayeen 16 hay’adood oo kuwa samofalka ah iyo la wareegidii ay la wareegtay xarumahoodii iyo qalabkii yaallay,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Ban oo afhayeenaddiisa ay saxaafadda u akhrisay.
Mr. Ki-Moon wuxuu sheegay in hay’adahaas ay ahaayeen kuwo ka shaqeynayay inay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in tallaabadan ay ka horimaanayso in dadka dhibaateysan la caawiyo.
“Dhammaan dhinacyada isku haya Soomaaliya waa inay xushmeeyaan sharciyada hay’adaha caalamiga ah ee samofalka ka shaqeynaya,” ayuu Ki-Moon ku sheegay qoraalka uu soo saaray Isniintii shalay.
Xarakada Al-shabaab ayaa ku eedeysay hay’adahan inay faraha kula jireen howlo basaasnimo ah, qaarkood ay adeegsanayeen tira-koobyo been abuur ah oo ay dadka ugu sheegayeen in laga horyimaado Xarakada Al-shabaab.
Dagaal u dhexeeya Ahlu-sunna Waljamaaca iyo Al-shabaab oo ka dhacay Tuulada Far-barwaaqo ee Gobolka Gedo
Dagaal aad culus islamarkaasina sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa deegaanka Far-barwaaqo ee gobbalka Gedo ku dhexmaray xarakada Al-shabaab iyo ururka Ahlusunna Waljameeca ee gobolkaasi Gedo.
Inta la ogyahay ilaa afar qof ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacantahay, kuwaa oo isugu jira dhinacyadii dagaallamayay iyo weliba dad rayid ah.
Dagaalka ayaa lagu soo waramayay in uu yimid kagadaal markii xoogaga Ahlusunna ay weerar ku qaadeen fariisin ay dagaalyahanno katirsan Alshabaab ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka Far-barwaaqo, taasoo keentay in uu halkaasi ka dhaco iska horimaad xooggan.
Culumaa’udiinka Ahlusunna Waljamaaca ee gobolka Gedo ayaa guulo ka sheegatay dagaalkii shalay, waxaana ay xuseen in ay Jab xooggan u geysteen xoogag katirsan Alshabaab oo ay dagaalka ku qaadeen.
Afhayeenka Ahlusunna Waljameeca ee gobollada Koonfureed Sheekh Max’ed Xuseen Al-qaadi oo faahfaahin ka bixinayay dagaalkii shalay ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkii shalay, waxaana uu sheegay in dagaalku ay iyagu qaadeen.
Sheekh Al-qaadi ayaa sheegay in ay qorsheynayaan dagaal kama danbeys ah oo ay gobolka Gedo kaga nadiifinayaan xoogaga Alshabaab oo iyagu ka arimiya qeybo katirsan gobolkaasi.
Dhinaca kale ma jiraan ilaa imika wax faahfaahin ku saabsan dagaalkii shalay oo kasoo baxay xarakada Alshabaab, waxaana uu dagaalkani kusoobeegmayaa xilli ay inta badan gobollada dalka Soomaaliya ka jiraan dhibaatooyin colaadeed, kuwaasoo sababay in kumannaan dad ah ay ka qaxaan guryahoodii, mana jiraan ilaa imika saansaan nabadeed oo muuqata, iyadoona guud ahaan dalka ay ka soconayaan abaabullo dagaallo oo hor leh, waxaana dad badani ay ka deyrinayaan mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ee iyagu wehelka u noqday dagaallo iyo qax aan dhamaad lahayn.
Farmaajo iyo Cismaan Caato oo Shariif Xasan wax ka sheegaya
Farmaajo oo SHariif Xasan Eedeeyey
Xildhibaan Cismaan Caato, isaga oo Muqdisho jooga Caayey Shariif Xasan iyo Sheikh Shariif
Farxiyo Fiiska iyo Niiko
Sheikh Shariif markii uu Yimid Washington DC Sanadkii hore
WARAYSI IYO WARBIXIN UU BIXINAYO PROF. MAXAMED XAJI MUKHTAR. & PROF. SALIM ALIYOW IBROW IYO SULDAN WARSAMEY
PROF. MAXAMED XAJI MUKHTAR
PROF. SALIM ALIYOW IBROW IYO SULDAN WARSAMEY
WARAYSI COL. CABAAS MAXAMUD CADDOW
KA FAA’IDEYSO – XAJKA IYO QOFKA
War Deg Deg ah: Qarax Miino oo lala eegtay Qeybta caruurta ee Isbitaalka Banaadir.
Qarax Miino oo lala eegtay Qeybta caruurta ee Isbitaalka Banaadir.
Xaalada Isbitaalka Banaadir ayaa saakay degan, kaddib markii aroornimadii hore qeybta caruurta ee Isbitaalka Banaadir, gaar ahaan xafiis lagu barto cilmiga caafimaadka uu qarax miino ka dhacay, kaasi oo ay ku dhaawacmeen ilaa 4 ruux.
Goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa Daqiiqado kaddib soo gaaray ciidamo ka tirsan Dowladda KMG ah, kuwaasi oo iyagu bilaabay howlgalo baaritaan ah oo la xariira kooxihii ka dambeeyay iyadoona la sheegay in ciidamadu ay qabteen ilaa 8-dhallinyaro ah oo looga shakiyay falkaasi inay ku lug leeyihiin.
Afar caruur ah ay ku dhaawacantay qaraxaasi, iyadoo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isla isbitaalkaasi, lamina oga sababta u saamaxday kooxaha qaraxa ka dhax dhaliyay gudaha Cusbitaalka.
Dhinaca kale waa markii ugu horeysay oo qaraxyo miino la dhigo Cusbitaalkaasi, isla markaana lagu qarxiyo xarumaha caafimaadka sida Isbitaalka Banaadir, waliba qeybta caruurta lagu daweeyo, iyadoona tallaabadani ay si weyn uga naxeen dadka degan magaalada Muqdisho.
War Deg deg ah: Qaraxyo ka dhacay Magaalada Muqdisho oo sababay Khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac fara badan
Nofeembar 28, 2011
Ugu yaraan 10-qof oo isugu jira ciidamada DKMG ah iyo dad shacab ah ayaa ku dhintay qaraxyo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir, waxaana qaraxyadaas ku dhaawacmay in ka badan 15-qof oo kale.
Qaraxyadan oo ka dhacay isgoysyada Sanka iyo afarta jardiino ee degmada Yaaqshiid ayaa waxay ka dhasheen miinooyin dhulka ku aasnaa ayaa waxay qarxeen iyadoo ciidammo ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya ay isku dayayaan inay ka saaraan goobihii lagu xabaalay, balse ay si lama filaan ah u qarxeen.
“Waxaan arkay dhimashada lix qof oo saddex ka mid ah ay ahaayeen ciidamada DKMG ah iyo saddex qof oo shacab ah, kuwaasoo ku dhintay qarax ka dhacay isgoyska Sanca,” ayuu yiri goobjooge ku sugnaa xiliga qaraxu dhacayay isgoyska Sanca.
Goobjooge kale oo isagana ku sugnaa isgoyska afarta-jardiino ayaa isaguna u sheegay saxaafadda in qaraxa ka dhacay isgoyskaas ay ku dhinteen afar qof oo sadex ka mid ah ay ahaayeen ciidamada DKMG ah iyo qof shacab ah.
Qaraxyadan ayaa waxaa ku dhaawacmay 15-qof oo ay ku jiraan ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya, kuwaasoo loo qaaday isbitaalka Keysaney si loogu daweeyo, waxaana labada miino ee qarxay ay ka mid ahaayeen shan miino oo xalay oo keliya lagu aasay degmada Yaaqshiid.
Maamulka degmada Yaaqshiid ayaa sheegay in lagu guuleystay in saddexii miino ee kale si nabadgalyo ah looga saaray halkii ay ku aasnaayeen, waxayna ka dalbeen dadka ku nool degmadaas inay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka.
Xarakada Al-shabaab oo 16 hay’ado Samofal ah ka joojiyay shaqooyinkii ay ka hayeen gobollada ay ka taliso
Xarakada Al-shabaab oo ka talisa gobollo badan oo Soomaaliya ku yaalla ayaa maanta ka joojisay 16 hay’adood oo kuwa gargaarka ah shaqooyinkii ay ka hayeen gobollada ay ka taliyaan, sida lagu sheegay war ay saxaafadda ugu talogaleen oo Isniinta maanta ah ay soo saareen.
Warsaxaafadka oo kasoo baxay xafiiska xafiiska la socodka haya’daha ajnabiga ah ee Xarakada Al-shabaab oo marka lasoo gaabiyo loogu yeero (OSAFA) ayaa lagu sheegay in baaris hal sano socotay oo hay’adaha lagu hayay ay go’aansadeen inay maanta oo Isniin ah ka joojiyeen howlihii ay ka haleen Soomaaliya.
Hay’adaha shaqooyinka laga joojiyay ayaa waxay isugu jiraan hay’adaha Qarammada Midoobay, kuwo reer galbeed ah iyo hay’adda Saacid oo Soomaali ah. Waxayna kala yihiin:
1.Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
2.World Health Organisation (WHO)
4.United Nations Population Fund (UNFPA)
5.United Nations Office for Project Services (UNOPS)
6.Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU)
7.Norwegian Refugee Council (NRC)
8.Danish Refugee Council (DRC)
10.Norwegian Church Aid (NCA)
11.Cooperazione Internazionale (COOPI)
12.Swedish African Welfare Alliance (SAWA)
13.German Agency For Technical Cooperation (GTZ)
14.Action Contre la Faim (ACF)
Xarakada Al-shabaab ayaa hay’adaha ay shaqooyinka ka joojisay ku eedeysay inay qaarkood isticmaalaan xogo aan sax ahayn oo ku saabsan howlaha ay qabteen iyo sidoo kale xogo ku saabsan dadka ku nool deegaannada ay howlaha ka qabteen oo aan sax ahayn.
Sidoo kale, waxaa hay’adaha lagu eedeeyay inay wakiillo u yihiin kaniisado, ayna gudbiyaan warar ka dhan ah muslimiinta, gaar ahaan mujaahidiinta. Iyagoo sheegay inay caawiyaan kuwa doonaya inay burburiyaan ismaamulka shareecada Islaamka.
Hay’adahan ayaa eedeymaha loo jeediyay waxaa sidoo kale ka mid ah inay ka shaqeynayaan sidii la isaga horkeeni lahaa beelaha Soomaaliyeed, dalka oo dhan loogu baahin lahaa colaado.
Waxyaabaha kale ee lagu eedeeyay hay’adaha ayaa waxaa ka mid ah inay lugta kula jiraan sidii ay u curyaamin lahaayeen wax-soosaarka dalka, sida dhaqashada xoolaha nool iyo beeraha, si ay dadka Soomaaliyeed iyaga ugu hoos-noolaadaan.
Sidoo kale, Hay’ada ACF (Action Contre le faim) iyo Saacid oo ah mid Maxali ah oo aan la xiriiray mas’uuliyoontooda ayaa ii sheegay in madaxdooda ku sugan Nairobi
Hay’ada ACF (Action Contre le faim) iyo Saacid oo ah mid Maxali ah oo aan la xiriiray mas’uuliyoontooda ayaa ii sheegay in madaxdooda ku sugan Nairobi ay ku soo wargeliyeen arrimahan, ka hor inta aaney shaacin Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina loogu baaqey in dhaq-dhaqaaqyadooda ay feejignaan geliyaan, si looga hortago falal ka yimaado Al-Shabaab.
Xarakada Al-Shabaab ayaa la wareegtay xafiisyadii ay ku howl geli jireen hay’ado ay sheegeen in ay ka mabnuuceen deegaanada ay maamulaan,xilli shaqaalihii hay’adahaasi qaarkood ay isaga baxeen deegaanadaasi.
Xafiisyadii hay’adaha ee gobolada Baay, Bakool iyo Shabeelaha hoose ayay wararku sheegayaan in ay galeen ciidamo ka socda xarakada Al-Shabaab, ayna qaateen qaar ka mid ah qalabkii yaalay.
Ilo wareedyo ku sugan Baydhabo ayaa sheegaya in xarumihii hay’adaha 16-ka ah ee ay xarakadu Albaabada isugu dhufteen la galay, ayadoo ilaaladii halkaasi joogayna lagu amrey in ay goobahaasi isaga tagaan.
Sidoo kale waxaa eedaha hay’adahan loosoo jeediyay ka mid ah inay mas’uul ka yihiin qoxootiga dalka ka cararaya, sidoo kalena aysan ogolayn inay sameeyaan xal loo helo dhibaatooyinka haysta dadka ku barakacsan gudaha Soomaaliya.
Xarrakada Al-shabaab ayaa uga digtay hay’adaha kale inay la shaqeeyaan 16-ka hay’adood ee ay ka joojisay howlihii samofal ee ay ka hayeen gobollada bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya, waxaana lagu sheegay warxaafadeedka in hay’addii lagu helo inay la shaqeynayso hay’adahaas iyadana laga joojin doono shaqada ay hayso iyadoo aan wax ogeysiin ah la siin.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Xarakada Al-shabaab ay shaqooyinkii ka joojisay hay’ado gargaar oo ka howlgala gobollada ay ka taliso, waxaase sannadkii 2010 ay shaqooyinkii ka joojisay in ka badan 10-hay’adood oo ay ku jiraan kuwa Qarammada Midoobay.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2011.